म अब जागिर गर्दिनँ!
सेतोपाटी - काठमाडाैं
ईश्वरका तानाबानामा मनको विश्वास
समाजको विकाससँगै सामाजिक मूल्य-मान्यता र प्रणालीहरू विकास गरियो। समाज विकासको प्रारम्भिक चरणमा मान्छेलाई धार्मिक माध्यमबाट एकत्रित गरेर अघि बढाउँदा डर, त्रास र आशंका बीचमा परेका मान्छेहरू कुनै न कुनै धर्ममा आबद्ध बने। मान्छे मान्छेकै रूपमा स्वतन्त्र र स्व-सम्भावना बोकेर जन्मिए पनि प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा कुनै न कुनै धर्मको घेराभित्र परेपछि उसका मूल्य र मान्यता जानेर वा नजानेर र चाहेर वा नचाहेर धार्मिक मूल्य-मान्यताबाट प्रभावित हुन थाले।
लोकान्तर - धनगढी
बाह्रखरी - काठमाडाैं
मलाई विश्वास लागेन । भाउजूको आफ्नै परिवार छ । जिम्मेवारीको बोझले थिचिएकी छिन् । कसरी उसलाई पैजब दिन सक्छिन् ? अर्को महिना म माइती गएपछि भाउजूलाई सोधेँ, “भौजी, गुलाबके पैजब किनदेलही ?” मेरो कुरा सुनेर भाउजूले जवाफ फर्काइन्, “हम कत से किनदेबै ? पौहना बन्या देलक ।”
अनलाइनखबर - काठमाडाैं
श्रीमती मालार्डलाई बिसञ्चो नै त थिएन तर उनी पूर्ण स्वस्थ पनि थिइनन् । पछिल्ला कतिपय वर्षदेखि मुटुको व्यथाले उनलाई निरन्तर दुःख दिइरहेको थियो ।
‘राजतन्त्र पतनको मुख्य कारण दरबार हत्याकाण्ड नै हो, त्यसपछि दरबारको रोशनी गयो’
हिमाल खबर - काठमाडाैं
९९४ सालको हिउँदमा बबरमहलमा जन्मिएका सागरशमशेर जबराका अनेक परिचय छन्। श्री ३ महाराज चन्द्रशमशेरका पनाति सागरशमशेर बुबा मृगेन्द्रशमशेर र दाजु भरतशमशेरद्वारा स्थापित गोरखा परिषद् हुँदै २०१७ सालको राजा महेन्द्रको ‘कू’ पछि परिषद्को नेपाली कांग्रेसमा विलयनसँगै नेपाली कांग्रेस पार्टीमा संलग्न रहँदै आएका छन्। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कमिटी सदस्य र विदेश विभाग प्रमुख रहिसकेका राणा हिजोआज पार्टीमा सक्रिय नदेखिए पनि लेखन कार्यमा मग्न छन्।
विष्णु माझी–अरुले खोज्दा भेटिँदैनन्, माइतीले सत्य बोल्दैनन्
देशसञ्चार - काठमाडाैं
असोज ६ गते विष्णु माझीको माइतीमा ‘एकाहा’ (आफन्त बितेको वर्षदिनमा लगाइने पूजा) लगाइएको थियो। विष्णु माझीका बुबा र आमा बितेको एक वर्ष भएको थियो। माझीका दाइ बाबुराम माझी अनि बहिनी जीवन माझीलगायत गाउँ टोलका धेरै मानिस उपस्थित थिए, तर विष्णु माझी थिइनन्।
पहिलोपोष्ट - काठमाडाैं
लोकान्तर - काठमाडाैं
पाल्पा झरेवाका हरि बमरेल पछाडि परेको दलित समुदायको क्षेत्रमा सानैदेखि काम गर्न चाहन्थे । त्यो कुरा उनको व्यवहार र चिन्तनमा लगातार व्यक्त भइरहन्थ्यो ।
एउटा समूह छ । जहाँ २० जना कथाकारको ऊर्जा छ । ती ऊर्जावाहक आत्मालाई सुन्दा लाग्छ, हरेकको धड्कन अलग–अलग छ । पुस्तकको आवरणमा ती ऊर्जाहरूलाई साझा बनाएर लेखिएको छ, ‘छकालै’ ।
नागरिक दैनिक - मुकेश मल्ल
तामाङहरूले इतिहासमा भोगेको भुक्तमान
नयाँ पत्रिका दैनिक - राजकुमार दिक्पाल
दरबारमा सुसारेहरू नियुक्त गर्ने प्रचलन छँदै थियो। तिनै सुसारेमध्ये एक दिलकुमारी ब्लोनलाई भीमशमशेरले विवाह गरी सीता बडामहारानी बनाए। उनका लागि सीता भवन पनि बनाइदिए, जहाँ अहिले बालमन्दिर रहेको छ।
गोरखापत्र - प्रकाश तिवारी
बेलुकीपख माइती जान निस्केकी थिई आशा। उसको कानमा कविता वाचन गरेको आवाज प¥यो। हिँड्दै जाँदा उसले देखी, चोकमा दश–बाह्र जना मानिस भेला भएका थिए। बजारको एउटा कुनामा ‘सडक कविता गोष्ठी’ लेखिएको ब्यानर टाँगिएको थियो। ब्यानर अगाडिको बेञ्च र कुर्सीमा पाँच जना वरिष्ठ साहित्य अनुरागी बिराजमान थिए।
ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट टेलिभिजनले देखाएको रंगिन सपना
बाह्रखरी - काठमाडौं
सानैदेखिको उनको चाह थियो, मलाई सबैले चिनोस्। नाच्नुको उद्देश्य पनि त्यही नै थियो। ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट टेलिभिजनले देखाएको रंगिन सपना थियो यो उनको। नभन्दै विद्यालय र गाउँमा नाच्दानाच्दै उनलाई सात गाउँले चिन्न थालेका थिए।
फिजीमा हेलम्बु गाउँ
अन्नपूर्ण पोष्ट - चेतन पन्त
अझै पनि उनीहरूको चुलामा नेपाली परिकार पाक्छ, नेपाली भेषभूषा लगाउँछन्। उनीहरूसँग सबै छ तर भाषा छैन। भाषाबिना पनि नेपाली पहिचान, नेपालप्रतिको अगाध माया, नेपालीप्रतिको असीम भातृत्व संसारमा छ भने त्यो फिजीमा छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले डेढ दर्जन मन्त्रालय आफैंसँग राखेको साढे दुई महीना भइसकेको छ। उनले तीन–तीन पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा जम्मा ६ जनालाई मन्त्री बनाउन सके।
प्रजातन्त्र संस्थागत गर्न ‘राजनीतिक’ अपराधीहरुलाई दण्डित गर्नु आवश्यक
झट्ट हेर्दा नेपालको अस्थीरता, अनिश्चितता र अराजकता विश्वकै एउटा ‘मिनी रुप’ जस्तो लाग्छ। विश्वका हरेक सार्वभौम मुलुकप्रति त्यहाँका जनताको आस्था र विश्वास या त्यसको कमी हुनुमा त्यहाँका शासकको चरित्र, क्षमता र राज्यप्रति उनीहरुको वफादारी मुख्य कारण बन्ने गर्छ।
‘बजार भाउ चर्कियो, अनुगमन गर्ने र निर्देशन दिने मन्त्री छैनन्’
नेपालीको ठूला चाडपर्व दसैँ सुरु हुनै लाग्दा उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य वृद्धि भइरहेको छ । उद्योगी–व्यापारीले खाद्यवस्तु लगायतका हरेक सामग्रीको आफूखुसी मूल्य निर्धारण गर्दा सरकार र संसदीय समितिहरू निकम्मा भएको उपभोक्ताले गुनासो गरिरहेका छन् ।
नेपाल चीन व्यापार: खासा र केरूङ्गबाट किन सीमित कन्टेनरमात्र पठाउने गरिएको छ?
यतिखेर तातोपानी हुँदै दैनिक औसतमा १० र केरूङ्ग हुँदै दैनिक ९ कन्टेनर मात्र नेपाल भित्रन दिइनुलाई चिनियाँ अधिकारीहरूले कोभिड महामारीलाई कारण बताएको ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत नवराज ढकालले बताए।
सेतोपाटी - चितवन
संसदको झगडा र राष्ट्रको खाँचो
भाद्र २८ गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद बैठक अगाडि बढाएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदले शक्ति प्रदर्शन गरे। शक्ति प्रदर्शनका क्रममा माइक भाँच्ने, सभामुखमाथि जाइलाग्ने, कुर्सी भाँच्नेसम्मका अराजक गतिविधि देखिए। सभामुखमाथि जाइलाग्ने प्रयास गर्दा मर्यादापालकसँग एमाले सांसदको केहीबेर घम्साघम्सी चलेको थियो। एमाले सांसदले रोस्ट्रममा उक्लने प्रयास गर्दा मर्यादापालकको काँध मात्र चढेनन्, हात टोकेको र चिथोरेको दृश्य समेत देखिए। २०४७ यता विभिन्न कालखण्डमा संसद्मा घटना देखिँदै आएका छन्।
म्यान्मारः कोरोनाभन्दा घातक जुन्ताको सैन्य आतङ्क
सुधा - म्यान्मार
म्याग्देली ब्राह्मण युवकको बंगुर पाल्ने माेह [भिडियाेसहित]
सुरेन्द्र राना 'घुमफिरे' - म्याग्दी
पान बेच्ने केटी
जीवन आचार्य - म्यान्मार
प्रचण्डले ‘जनयुद्ध’ कालमा जम्मा गरेको कालोधन सेतो बनाउन लगानीको स्रोत नखोज्ने व्यवस्था भएको हो: डा. विजय सुब्बा (भिडियो)
डा. विजय सुब्बा - काठमाडौँ
बथानसँगै पाटनमा भेटिएका मनिषा र गीताहरू (फोटो कथा)
डिल्ली पाण्डे - जुम्ला
माओवादी छाडेर सिंगो गाउँ नै एमाले प्रवेश (भिडियो)
सन्ताेष बराइली - जनकपुर
माधव नेपालसहित १४ सांसदकाे पद खारेजी मुद्दामा आज पनि सुनुवाइ हुँदै
प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिमण्डल विस्तार गरे राष्ट्रपतिले नयाँमन्त्रीको सपथ गराउन नसक्ने, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सपथग्रहणसम्बन्धी कानून समाप्त
बिएल विशेष संवाददाता - काठमाडौं
प्रेम आलेकाे छट्पटी: घरी-उता घरी-यता, यस्ताे थियाे उनकाे व्यथा (तस्वीरहरू)
उर्लाबारीकी रोजीको माईती पक्षको दाबीः मर्नुपर्ने कारण नै थिएन,हत्या गरेर झुन्ड्याईयो
अभिवादन– नमस्कार ! नमस्ते ! प्रणाम ! पाउलागी ! हाइ ! हेलो !
मैले देखेका पाँच भलाद्मी, जो रोचक हुन सक्छन्
भाग्यले खान पाएका प्रचण्ड, भाग्यले खान नपाएका शहीद कमरेड सुनिल
दिलिप कुवँर - राेल्पा